Ukucaciswa kwesikrini sensimbi esiqoshiwe se-laser cut
Okubalulekile Aluminium sheet, Stainless steel sheet, corten steel
Ubukhulu 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 15mm
Ubukhulu. usayizi 1800mm*6000mm
Ukwelashwa Okungaphezulu I-Powder coating, i-PVDF
Umbala Noma yimiphi imibala ye-RAL ozikhethele yona
Iphethini (design) Noma yimaphi amaphethini singawenza ngendlela oyidingayo
Isicelo of laser cut eqoshiwe metal zokuhlobisa screen
1. Noma yimuphi umhlobiso wangaphakathi uyasebenza esetshenziselwa ukuhlobisa kwangaphakathi, njengengemuva le-TV, umnyango wekhabethe, uhlaka lokubonisa, uhlaka, indawo yefenisha, udonga oluyisilingi, njll.
2. Izindonga ezingemuva ze-TV, usofa, eceleni kombhede, ihholo elingaphambili, izitebhisi, igumbi lezingane, isifundo nokunye.
3. Ukuqagela kwesithombe senkampani, igumbi lenkomfa, i-teahouse, zonke izinhlobo zezitolo eziwuchungechunge, amahhotela, izindawo zokudlela, umhlobiso wezakhiwo ongemuva wenkulisa.
4. Udonga lwesiteshi, i-wharf, igumbi le-VIP lesikhumulo sezindiza, udonga lwangemuva lwenkundla, i-cinema, isitudiyo somsindo, i-cinema, isitudiyo se-TV, isakhiwo sehhovisi likahulumeni kanye nokunye okuhlobisa indawo yomphakathi.
Izinkonzo zethu kanye nezinzuzo
1. Okuhlangenwe nakho kwebhizinisi lamazwe ngamazwe ku-wallboard ye-3D MDF eqoshiwe.
2. Ithimba labadayisi abachwepheshile ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu.
3. Isevisi enhle kakhulu emva kokuthengisa, efanelekayo ukubambisana kwesikhathi eside, kodwa hhayi umsebenzi wesikhathi esisodwa.
4. Ubhekene nezinkinga zekhwalithi ohlelweni lokukhiqiza
5. Yenza ukulawula kwekhwalithi okuqinile futhi unikeze umbiko wokulawula ikhwalithi kumakhasimende ngaphambi kokulethwa.
6. Nikeza amasampula emikhiqizo emisha ngesikhathi sokuqala ukuze uthole imakethe.
Phendula wonke ama-imeyili phakathi namahora angama-24.
8. Ukulethwa okusheshayo njengoba kuthenjisiwe.
9.Yonke imikhiqizo yethu ihlangabezana nezindinganiso zamazwe ahlukene
Okwedlule: Idiphu elishisayo lensimbi enamahalavu ensimbi ewutshani waseKraal mesh
Olandelayo: Idayimane elinwetshiwe le-aluminium mesh elisetshenziselwa ukuhlobisa kwezakhiwo